धनगढीबाट काठमाडौंका लागि उडेको बुद्ध एयरको जहाज अन्तै पुग्यो, कति थिए यात्रु ? — Imandarmedia.com
धनगढीबाट काठमाडौंका लागि उडेको बुद्ध एयरको जहाज अन्तै पुग्यो, कति थिए यात्रु ?
काठमाडौं । धनगढी विमानस्थलबाट काठमाडौंका लागि उडेको बुद्ध एयरको जहाजमा काठमाडौँ पुगेन तर अन्तरे गएर आकस्मिक अवतरण भयो । यो बुधबारको खबर हो ।
जहाजमा यात्रा गरिरहेका एक यात्रुको स्वास्थ्यमा समस्या देखा परेपछि धनगढी विमानस्थलबाट काठमाडौंका लागि उडेको बुद्ध एयरको जहाज नेपालगञ्ज विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण गर्नु परेको हो ।
बुद्ध एयरका अनुसार धनगढीबाट काठमाडौंका लागि उडेको उडान नम्बर २५२ जहाजमा यात्रुको स्वास्थ्यमा अकस्मात समस्या देखिएको थियो । सो जहाजलाई धनगढीबाट नजिकैको नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अवतरण गराइएको छ ।
विमानस्थलमा एम्बुलेन्स र स्वास्थ्यकर्मीको समेत व्यवस्था गरिएको थियो । यात्रुको चेकजाँच र यात्रुले ठिक छ भने पछि बिरामी आफन्तका साथमा बाहिर निस्किएको कम्पनीले जनाएको छ । उतानेपाल एयरलाइन्सको एयरबस आरए-४०० को दुबै टायर पड्किँदा चार दिनदेखि यात्रुहरू बैंककमा अलपत्र परेका छन्।
नेपाल वायुसेवा निगमको कमजोर व्यवस्थापनका कारण एयरबसको टायर समयमै फेर्न नसकेका कारण यात्रुहरू बैंककको सुवर्णभूमि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिक बसिरहेका छन्।
निगम स्रोतका अनुसार शुक्रबार बैंककको स्थानीय समयअनुसार अपराह्न ५ बजे एयरबसको पछाडिका दुबै टायर पड्केका थिए। निगमका एक वरिष्ठ पाइलटका अनुसार जहाजमा १५५ जना यात्रु थिए। जहाज क्याप्टेन प्रशान्त राई र कोपाइलट ग्रीष्म श्रेष्ठले उडाउन लागेका थिए।
तर, जहाज टेकअफ हुन लाग्दा ककपिटमा ‘ब्रेक टेम्प्रेचर हाई’ रहेको म्यासेज आयो। यस्तो अवस्थामा जहाज टेकअफ गर्नु खतरा ठानेर पाइलटले आकस्मिक रूपमा ब्रेक लगाएर जहाजलाई सुरक्षित गराए।
‘टेकअफ गर्नै लागेको जहाजमा बेस्सरी ब्रेक लगाउँदा पछाडिपट्टिका चारमध्ये एक एक वटा टायर पड्किए,’ ती पाइलटले भने। उनका अनुसार ब्रेक सिस्टममा रहेको तेल तीन सय डिग्री भन्दा बढी ताते पाइप नै फुटेर जहाजमा आगो लाग्ने जोखिम हुन्छ।
यसरी, ब्रेक सिस्टम हिट हुँदा चिस्याउने यन्त्र जहाजहरूमा पनि हुन्छ। तर, नेपाल वायुसेवा निगमका एयरबसमा कुनै पनि चिस्याउने उपकरण छैनन्।
‘हिमालय एयरलाइन्सको जहाजमा पनि यस्तो यन्त्र छ, विश्वभरि नै जहाज चिस्याउने यन्त्र हुन्छ। तर यी जहाज खरिद गर्दा यो पाटो हेरेको देखिँदैन,’ ती पाइलटले भने, ‘यो व्यवस्थापन पक्षको गम्भीर लापरबाही हो।’
उड्न लागेको एयरबसलाई पाइलटले बुद्धिमतापूर्वक रोकेर ठूलो जोखिम किनारा लगाएको ती पाइलटले जानकारी दिए। ‘पाइप फुटेर तेल चुहिएको भए आगो लाग्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ, धन्य धावनमार्गमै जहाजलाई कन्ट्रोल गर्न सकियो,’ उनले भने।
पाङ्ग्रा फेर्न आइतबार राति नै प्राविधिक टोली थाइल्याण्ड पठाइए पनि अहिलेसम्म जहाज तयार भइनसकेको उनले बताए। ‘चार-चार दिनसम्म पाङ्ग्रा फेर्न नपाएर यात्रु अलपत्र पार्नु लापरबाही हो, उनले भने।
उनका अनुसार जहाजको हरेक गन्तव्यमा आकस्मिक रूपमा चाहिने चिजहरू राखिनुपर्ने हो। ‘नेपाल वायुसेवा निगमले त्यतिसम्म गरेको छैन, गाडीमा त एक्स्ट्रा पाङ्ग्रा राखिन्छ, हाम्रो जहाजको अवस्था यस्तो छ, उनले भने।
नेपालबाट पाङ्ग्रा पठाएपछि फेर्न पनि विलम्ब भएको विषय आफूले नै नबुझेको ती पाइलट बताउँछन्। नेपाल वायुसेवा निगमका सहायक प्रवक्ता ज्ञान अर्यालले भन्सार जाँचपासमा ढिलाइ भएका कारण समयमै टायर पठाउन नसकिएको बताए।
विमान उड्ने बाटो: शको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अत्यन्त व्यस्त रहन्छ । यो विमानस्थलमा हरेक दिन पाँच सय वटाभन्दा बढी उडान तथा अवतरण हुने गर्छ । हजारौँ यात्रुलाई पाइलटले विमान उडाएर गन्तव्यसम्म पुर्याउँछन् । ती पाइलटलाई कन्ट्रोल रुममा बसेका एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी)ले बाटो देखाउँछन् ।